Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Vitamin B complex ဗီတာမင် (ဘီ) အုပ်စု
Vitamin B complex ဗီတာမင် (ဘီ) အုပ်စု
Tue, Nov 8, 2011 at 7:22 AM,
What I want to know is should I take Vitamins B every day? Do they have side effects if I take 1 tablet per day?
ဗီတာမင် ဘီ အုပ်စု ထဲမှာပါတာတွေ -
ရောဂါ = ဗီတာမင် ဘီ အုပ်စုဆေး သောက်နည်း
• Alcoholism အရက်စွဲသူ = B complex (50 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 50 milligrams)
• Chronic Fatigue နာတာရှည် အားယုတ်ခြင်း = B complex (50 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 50 milligrams) မနက်စာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြား။
• Chronic Pain နာတာရှည် ကိုက်ခဲနေသူ = B complex (50 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 50 milligrams) မနက်စာ-ညစာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြားစီ။
• Depression စိတ်ကျရောဂါ = B complex (50 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 50 milligrams) မနက်စာ-ညစာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြားစီ။
• Diabetes ဆီးချိုရောဂါ = B complex (100 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 100 milligrams) မနက်စာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြား။
• Hair Problems ဆံပင်ကျွတ်သူ = B complex (50 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 50 milligrams) မနက်စာ-ညစာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြားစီ။
• Heart Disease Prevention နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်ရန် = B complex (50 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 50 milligrams) မနက်စာ-ညစာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြားစီ။
• Infertility, Female ကလေးမရသေးတဲ့ အမျိုးသမီး = B complex (50 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 50 milligrams) မနက်စာ-ညစာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြားစီ။
• Leg Cramps ကြွက်တက်ခြင်း = B complex (100 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 100 milligrams) မနက်စာ-ညစာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြားစီ။
• Multiple Sclerosis (မာလ်တီပယ်-စကယ်လ်ရိုးဆစ်) အာရုံကြောရောဂါ = B complex (100 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 100 milligrams) မနက်စာ-ညစာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြားစီ။
• Nail Problems လက်သဲ-ခြေသဲရောဂါ = B complex (50 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 50 milligrams) မနက်စာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြား။
• Nicotine Dependence ဆေးလိပ်စွဲသူ = B complex (50 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 50 milligrams) မနက်စာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြား။
• Stress စိတ်ဖိအားများနေသူ = B complex (100 micrograms of vitamin B12 and biotin, 400 micrograms of folic acid, and 100 milligrams) မနက်စာ စားပြီးတိုင်း ၁ ပြား။
Side Effects ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ သိပ်မများပါ။ ဆေးသောက်သူတိုင်း သိသာမှာက ဆီးဝါမယ်။ Riboflavin (B2) ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ဆီးက ဆေးနံ့လဲရမယ်။ ဆေးစသောက်ဘူးသူတွေမှာ အစာမကျေသလိုဖြစ်တတ်တယ်။ ဆေးကို အစာစားပြီးချိန်မှာ သောက်သင့်တယ်။ ဆရာဝန် ညွှန်တဲ့အတိုင်း သောက်ရင် ပိုပြီး ဆိုးကျိုးနည်းတယ်။ ဆေးသောက်တာ များသွားလို့ ရစေနိုင်တာတွေကို အောက်မှာ စာရင်းချလိုက်ပါတယ်။
Thiamine (B1) ဗီတာမင် ဘီ (၁)
• Heart palpitations ရင်တုန်၊
• High blood pressure သွေးဖိအားတက်၊
• Hypersensitivity of skin ဆေးမတည့်တာဖြစ်၊
• Agitation and irritation စိတ်တို-ဒေါသထွက်၊
• Low blood pressure သွေးဖိအားကျ၊
• Itchiness of the skin အရေပြားယား၊
• Flushing of the skin အရေပြားနီမြန်း၊
• Throbbing head ခေါင်းထဲထိုး၊
• Vomiting and nausea ပျို့-အန်၊
• Edema ကိုယ်ရောင်၊
• Joint pain အဆစ်နာ၊
• Dehydration ရေဓါတ်နည်း၊
• Numbness of fingers with tingling feeling လက်ဖျားထုံ-ကျင်၊
• Loss of muscle coordination ကြွက်သားတွေ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်တာနည်း၊
• Mood swings စိတ်အခြေပြောင်း၊
• Kidney failure ကျောက်ကပ်မကောင်း၊
• Bloating ဗိုက်ကယ်၊
• Anxiety စိုးရိမ်၊
• Numbness and tingling of various body parts (face and fingers) လက်ချောင်း-မျက်နှာ ထုံ-ကျင်၊
• Pregnant or breastfeeding ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ချိန်၊
• Stomach ulcer, Diabetes, Liver problems, Gout အစာအိမ်ရောဂါ၊ အသဲရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ ဂေါက်ရောဂါ ရှိနေသူ၊
• Herbal medicines တခြား (ဟာဗယ်) အားဆေးတွေလဲ သောက်နေသူ၊
• Allergic reactions to any medicines ဆေးမတည့်တတ်သူ၊
• Acne ဝက်ခြံရှိနေသူတွေ Vitamin B complex နဲ့ Vitamin B12 တွဲမသောက်ပါနဲ့။
• Cholesterol-lowering medications (ကိုလက်စထော) ကျဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Zocor, Mevacor, or Crestor သောက်နေရင် Vitamin B3 မသောက်ပါနဲ့။
• Bipolar disorder (ဘိုင်ပိုလာ-ဒစ်အော်ဒါ) ကြောက်စိတ်နဲ့ စိတ်ကျရောဂါ ရှိနေသူ Inositol နဲ့ Vitamin B complex ကို ဆရာဝန်မညွှန်ဘဲ မသောက်ပါနဲ့။
ဗီတာမင် ဘီ အုပ်စုဆေးက လိုအပ်နေသူတွေအတွက် အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဈေးလဲချိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစားအစာ မျှတ လုံလောက်အောင် စားနေသူတွေက သောက်ဘို့ မလိုပါ။